सुनको मूल्य बढ्यो, कति पुग्यो तोलाको ? - नागरिक रैबार::Nagarikraibar.com सुनको मूल्य बढ्यो, कति पुग्यो तोलाको ? - नागरिक रैबार
काठमाडौं : नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ४ सयले बढेको छ। मंगलबार सुन तोलामा ४ सयले बढेर ७२ हजार रुपैयाँ कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जनाएको छ।तेजावी सुनको मूल्य ७१ हजार ७०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
यस्तै, चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य वृद्धि भएको छ। आज चाँदी तोलाको ८६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। सोमबार चाँदी तोलाको ८५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
विश्वकप छनोट फुटबल : कुवेतसँग फेरि हार्‍यो नेपाल